Achọpụta WordPress Sidebar na otu esi arụ ọrụ ya - ọkachamara dị elu
Artem Abgarian, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọrụ, na-ekwu na maka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ, iwepụ WordPress sidebar nwere ike iyi ka ọ bụ ihe mgbagwoju anya. N'okwu a SEO, ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi wepu ma ọ bụ gbanyụọ akụkụ a dị ugbu a. Maka ọtụtụ WordPress gburugburu, nke a bụ nhazi ndabara nke siri ike ịhazi - computer services consulting corporation. N'ọnọdụ ndị ọzọ, isiokwu dịgasị iche nwere ike ịnwe koodu mgbagwoju anya nke nwere ike ịgụnye ọtụtụ ndị na-enweta ọnụọgụ ; arịrịọ.
Nke mbụ, ọnụọgụ ahụ na-abịa dịka ihe mgbakwunye isiokwu. Nke a pụtara na ọ nwere faịlụ PHP na mgbọrọgwụ nke ndekọ ọ bụla. Enwere mgbakwunye ngwa ngwa na wijetị nke sitere na gburugburu ma ọ bụ ngwa nrụnye. N'ọnọdụ ndị ọzọ, onye mmepụta weebụ nwere ike ịmepụta ụfọdụ ngbanwe omenala ha na-etinye ha na function.php.
Ịkwụsị ngalaba peeji nke WordPress
For a WordPress user who may want to disable or move the sidebar, you can go to appearance> widgets > sidebar. Site na ebe a, ịnwere ike ịtọ ọnọdụ nke sidebar na ihuenyo gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ ọnọdụ ziri ezi dị mma. N'ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, ọnụọgụ ahụ nwere ike ịnọgide n'otu ọnọdụ ahụ. N'okwu ndị a, wepụ WordPress sidebar nwere ike ịgụnye mgbanwe nke ụfọdụ PHP faịlụ. Ihe ndị a dị n'isiokwu a, n'ihi ya, ị ga - echegbula.
Wepụ WordPress sidebar site na isiokwu faịlụ
Usoro a nwere ike ọ gaghị emetụta ụfọdụ n'ime faịlụ dị mkpa nke isiokwu ahụ. Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ kachasị mma ị ga-esi ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka isiokwu ahụ Ọ bụrụ na ị na-eche na mmelite ahụ nwere ike imebi mgbanwe nke isiokwu ahụ, ọ dị mkpa ka ịnye isiokwu dabeere na nwata na isiokwu gị ugbu a. mara otú e si arụnye ha.
To make these adjustments, navigate to Appearance > Editor. Na ibe a, gaa n'akụkụ aka nri nke ihuenyo wee gaa faịlụ single.php, page.php na front-page.php. Site na nchịkọta nhọrọ a, ị nwere ike ịchọta ebe ị ga-esi nweta ya ; koodu. Wepụ koodu a kpamkpam site na ntinye akwụkwọ. Ndozi a kwesiri inwe ike idozi ihe esemokwu.
Wepụ faịlụ ọ bụla ọzọ nke a nwere ike ịbụ kpọmkwem maka ịnweta akụkụ ; arịrịọ. Ị nwere ike iji akara ngosi ma chọọ maka akara ọ bụla nke ga-esi nweta ọnụọgụ ; koodu ma wepu ya. Ndị a bụ ihe ndị dị n'akụkụ ọnụọgụ nke na - eme ka ọ na - eburu ya ọbụna mgbe ị nwere nkwarụ.
Iwepụ ngalaba peeji nke WordPress na isiokwu dị iche iche nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Ntuziaka a nwere ike inyere gị aka iwepụ ọ bụla WordPress sidebars. N'otu aka ahụ, WordPress nwere ike. Ngbanwe a ga-ekwe omume ya na ihe omuma nke onye mmepụta ihe. Ị nwere ike ịchọta site na koodu gị wee chọọ koodu nke na-anwa ime ka ị nweta ọnụọgụ ; arịrịọ. N'ọnọdụ nke koodu weebụ gị dị ka mgbagwoju anya, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye mmepụta weebụ. Ha nwere ike inyere gị aka ịchọta usoro ziri ezi nke koodu ịchọrọ iwepụ iji nweta usoro dum.